LLC "Aksentis" - Magazini "Potato System"
Iyo yazvino chinyorwa chePotato System magazini inowanikwa mune mobile application
Chikafu nguva dzose chinouya pakutanga
Matanho ekuchengetedza moto panzvimbo yekurima achawedzerwa
Munharaunda yeKaliningrad yakaongorora mamiriro ezvinhu mune agro-industrial complex
Ndiani achatora nzvimbo yemakambani ekunze pamusika weRussia AgroTech?
Mishonga yefungicide yechizvarwa chitsva: Syngenta yakanyoreswa MIRAVIS® neMIRAVIS® Neo muRussia
Kudyara mbatatisi muTrans-Baikal Territory
Sensory yekuongorora nzira ichabatsira kuona zvirwere zvezvirimwa padanho rekutanga
Philippine Varimi Association. Kuenderera mberi
Kushandiswa chaiko kwenematicide - kuvandudzwa kwekurima
Flame Sterilizing Mbatata Mbeu Tuber Kucheka Machine
Multicopter ndiye akanakisa mubatsiri mukugadzirisa munda
Mitemo mishanu yekushandiswa kwakabudirira kwemetham fumigants
Jeff Penner's medering drainage migero inopesana nekukukurwa kwevhu
Masayendisiti ari kutsvaga varimi vane chido chekusimudzira mitengo yefetireza nembeu yezvirimwa zvakasiyana
Kushambadzira mbatatisi uye kusikwa kwekukosha muEthiopiya
Mutsara mutsva wekurongedza mbatatisi wakavakwa muUrals
Wechidiki anodanana mechanic anoshanda mudunhu reAstrakhan
Kuratidzira kweSainzi neTekinoroji yeiyo Mbatatisi Indasitiri
Kuvandudza kushanda kwehunyanzvi hwekugadzira mini-mbatatisi tubers
Kura mbatatisi dzine utano. Kuisa zvinangwa zvemwaka
Calcium-magnesium kudya uye deoxidation yevhu sechivimbiso chegoho repamusoro rezvirimwa zveparutivi.
Fetereza Fertigrain Foliar Plus - sarudzo yakanakisa yezvirimwa zvemumunda
Ameliorants Omia: purofiti yekushandisa - kubva 49% uye pamusoro!
Nzira yekuwedzera sei purofiti yeware mbatatisi ne143 rubles pa 000 ha?
VIBRANCE® TOP - nhanho nyowani mukudzivirira mbatatisi kubva kuzvirwere zvevhu uye zvipembenene
Mbatatisi dzakasiyana dzeNORIKA kubereka = kuvimba mukuwana goho rakanaka!
Lisana - yakanakisa yekutanga mhando yemwaka mutsva
Kugona agronomy ndiyo imwe yedzakanakisa nzira dzekudzosera mari
McCain: Iyo yakanakisa fries yeFrench inoda yakanakisa mbishi zvinhu. Uye isu tinoronga kukura muRussia
"Zvipo zveMalinovka" pakati pemabhizinesi akanakisa eiyo agro-industrial complex yeKrasnoyarsk Territory yakagamuchira "Nzeve dzegoridhe"
"Dmitrovsky mbatatisi": mwaka 2021
Tummers: kubva kukambani diki yekuchengetedza kuenda kumutungamiriri wepasirese
kuru Success Story
Govera paTeregiramuGovera pa LinkedInGovera paVKTumira neE-mail
Mumakore apfuura, Aksentis LLC anga ari mumwe wevatungamiriri mukugadzirwa kwembatatisi yembeu muRussia Federation.
Iyo kambani yakatanga basa rayo muna2012, pakutanga, nzvimbo yekudyara yaive isingapfuuri mahekita mazana maviri ematapiri anotengeswa.
Parizvino, chimiro chenzvimbo dzakadyarwa dzinosanganisira zvinopfuura chiuru mahekita embeu mbatatisi, zvinopfuura zviuru zvitatu zvezvirimwa zvemaruva, pamwe nekutenderera kwezvirimwa panzvimbo yemafuro.
LLC Aksentis ine simba rekutsvagisa uye chigadziko chekugadzira kuverengera kuzere kutenderera kwekugadzirwa kwembeu. Iyo yekutanga kugadzirwa kwembeu sisitimu inosanganisira micropropagation laboratori yakashongedzerwa nemidziyo yazvino uno uye yepamusorosoro greenhouse tata, iyo inobvumidza kuwana anosvika mazana matanhatu nemakumi mashanu emaminiti emaminetsi pagore.
Chikamu chinotevera chekugadzirwa kwembeu inochengeterwa mbeu dzepakutanga, idzo dzinopa dziviriro yepamusoro yezvirimwa kubva pasimba rezvinhu zvakasikwa nebiotic. Nzvimbo dzekuchengetera dzakagadzirirwa nemadiridziro masisitimu uye anodzivirirwa kubva kuzvirwere zvinoteedzera. Kugadzirwa kwemhando yepamusoro uye yekubereka mbatatisi kunoitwa pachishandiswa hunyanzvi hunyanzvi-hunyanzvi uye hunyanzvi hunyanzvi hwezvakatipoteredza, izvo zvinoita kuti huve nehuwandu hwehuwandu hwehuwandu hwehuwandu uye hunoita mashandiro ese panguva yakakwana.
Pamusoro peiyo tekinoroji yakavandudzwa yekurima mbatatisi yembeu, inosanganisira kutenderera kwezvirimwa, kurimwa kwevhu, fetereza uye masystem ekudzivirira, mienzaniso yazvino uno yemuchina wepasi rose wekurima, kusanganisira maJohn Deere, Grimme, Lemken nevamwe, batsira mukuitwa kwezvirongwa zvekuda.
Hwaro hwekuwana zvigadzirwa zvemhando yepamusoro, pamwe nekugadzira, itsika yepamusoro yekugadzira, iyo inosanganisira zvinoverengeka zvakakosha zvinhu. Chekutanga pane zvese - inoshanda yekugadzira manejimendi pamatanho ese echiitiko, pamwe nekutarisa pamhedzisiro mhedzisiro, kunzwisiswa kwechirongwa uye maitiro nevose vatori vechikamu. Iri bhuroka rinosanganisirawo kuronga uye kugadzirisa, kugara uchiongorora uye kushanda panzvimbo dzakanyanya kutambura, kuenderera kwehunyanzvi uye kuvandudza mhinduro nyowani. Kunyatsotevedzera mashandiro etekinoroji, tsika, zvirevo, mamiriro ekugadzirwa uye kuchengetedzwa kwevashandi, zvirevo zvehurumende uye zvibvumirano zvebvumirano, zvinodiwa nemirau, pamwe nekurangwa kwebasa zvakare zvakakosha.
Chinhu chakakosha chiri kushanda pamwe nesosi huru yekambani - vashandi. Isu tinogadzira uye tinokudziridza timu yenyanzvi uye nevanhu vane pfungwa dzakafanana.
Kune izvi, zvinokwanisika kukurudzira kwevashandi, kurudziro yezviyero, kubatanidzwa mukuitwa kwechinhu chimwe nechimwe chinotora chikamu, mukana wekuzviziva-uye kuzvitaurira kune wese munhu, demokrasi yehukama-maneja-mushandi hukama hwakakosha.
Pamusoro pezve zvatinofarira isu, kambani yedu inofungawo nezvebhizinesi revatinoshamwaridzana navo nevatengi, sezvo kubatana kwakanaka uye kwakabudirira ndiko hwaro hwehukama hunobatsira, uye kuvhurika nekutendeseka ndiwo musimboti wemapurojekiti akareba-akabatanidzwa.
Nekudaro, nzira yekuvandudza tekinoroji uye sangano rebasa, kuenderera kwechimanje uye kuvandudzwa kwetekinoroji kunoenderana nekufungisisa, pamwe nehunhu hwakajeka kune vavanoshanda navo nevashandi vavo, zvinobvumidza kuwana zviratidzo zvepamusoro maererano nehuwandu hwekugadzira uye mhando yembeu mbatatisi.
Source: Kubva pane zvinyorwa kubva mumagazini yePotato Union
"Smart agronomy ndiyo imwe yenzira dzakanakisa dzekudzosera mari yako," anodaro Ian Wilson, anomhanyisa mapurazi eTulloch, ari padyo...
Isu tinoenderera mberi nekuburitsa zvega zvinhu kubva kuWPC (World Potato Congress), tichitaura nezve sangano rekugadzira mbeu mbatatisi muAfrica. Nyika...
Kurima kwemazuva ano hakusi mafoshoro nemapadza chete, asiwo midziyo yeutsva inoda ruzivo nehumwe hunyanzvi....
The company McCain yakavambwa nehama dzeMcCain muCanada muna 1957. Basa rake raive rakavakirwa pane nyore thesis - ...
Mabhizinesi edunhu, akawana mhedzisiro yepamusoro mumabasa avo zvichitevera mhedzisiro yegore rekurima, akapihwa mikombe "Golden Ear". Mibairo iyi yakapihwa kune vakakunda nemutevedzeri wasachigaro ...
Sergey Averin, agronomist weDmitrovsky Potato LLC Purazi redu, LLC Dmitrovsky Potato, riri muNekrasovsky District yeYaroslavl Region. Foromani...
Kubudirira kweTummers Chikafu Processing Solutions, yakavambwa muna 1976 muNetherlands, yakavakirwa pabasa revatengi. Makore anopfuura 40 ...
Isu tinovimbwa naPros
2025 matapuri ekuchengetera zvivakwa kuti zvivakwe muUkraine na35
Netherlands inogadzira parafini kubva mumarara embatatisi
"Nyamavhuvhu" Azerbaijan Astrakhan region Belarus Bryansk mudunhu Rutsigiro rwehurumende Kazakhstan Mubatanidzwa wembatatisi Krasnoyarsk Territory Madhiri efetiraiza Ministry of Agriculture yeRussian Federation Ministry of Agriculture Ministry of Agriculture yeRussian Federation Moscow nharaunda Nizhny Novgorod region Novosibirsk mudunhu Republic of Belarus Republic of Chuvashia Осс .ь United States Stavropol nharaunda Uzbekistan Ukraine Mbatatirwa kunze mbatatisi inokura magazini "Potato System" mbatatidziro cabbage mbatata mbatatisi uye miriwo coronavirus kudzokorora karoti borsch akaisa miriwo kudiridza kugadzirisa mbatatisi kudyara mbatatisi ChiFrench fries kugadzirwa mbatatisi yekutanga kubereka mbatatisi mbatatisi Kugadzirwa kwembeu dzemazamu kukohwa mbatatisi kuchengetwa mbatatisi mitengo mbatatisi